လိုက်နာမှု၊ သဟဇာတဖြစ်မှုနှင့်ကောင်းမွန်သောအစီအစဉ်ကိုလျစ်လျူမရှုပါနှင့်။ | Martech Zone
တနင်္လာနေ့, စက်တင်ဘာလ 4, 2006 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ကက်စကိတ်စတိုင်များ - သင်၏လျှောက်လွှာ၏အမြင်အာရုံအလွှာကိုအလယ်တည့်တည့်နှင့်နောက်ခံမှခွဲထုတ်ခြင်းအားဖြင့်၊ သင်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်၏သုံးစွဲသူကြားခံကိုပြောင်းလဲရန်ဖိုင်အနည်းငယ်ကိုပြောင်းလဲခြင်းထက်မကပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ CSS Zen ဥယျာဉ် စိတ်ကူးယဉ် CSS ၏စွမ်းအားကိုဖော်ပြသည်။ ဆိုက်တစ်ခုလုံး၏ HTML သည်အတူတူပင်ဖြစ်သော်လည်းသင် themes များအကြားပြောင်းလဲလိုက်သည်နှင့်အမျှ style sheet အသစ်များကို အသုံးပြု၍ site ကိုအသွင်ပြောင်းလိုက်သည်။ ငါသည်လည်းအလွန်အမင်းသူတို့ရဲ့အကြံပြုလိမ့်မယ် စာအုပ်.
တင်းပလိတ် - စာမျက်နှာတင်းပလိတ်များသည်သင်၏နောက်ကျောနှင့်ရှေ့ဆုံးအကြား 'အလယ်ဆင့်' ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အမှန်တကယ်ပြန်လည်ရယူထားသောကုဒ်များကိုစာမျက်နှာများမှဆွဲထုတ်ပြီး၎င်းအား template မှရည်ညွှန်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ တင်းပလိတ်များ၏အားသာချက်မှာဂျုံနှင့်ဂျုံမှုန့်တို့ကိုခွဲထုတ်ရန်ကူညီခြင်းဖြစ်သည်။ Back-end လုပ်ဆောင်ချက်သည်စာမျက်နှာလုပ်ဆောင်မှုကိုချိုးဖျက်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
ဘုံလျှောက်လွှာကုဒ် - လျှောက်လွှာအတွင်း၌တူညီသောကုဒ်ကိုနှစ်ကြိမ်ရေးရန်ဘယ်တော့မှမလိုအပ်ပါ။ သင်လုပ်ပါကသင်၏လျှောက်လွှာကိုမှားယွင်းစွာရေးသည်။ သင်ပြောင်းလဲမှုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပါက၎င်းပြောင်းလဲမှုကိုတစ်ခုတည်းသောနေရာတွင်သာပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
ဒေတာဘေ့စ ဒေတာများကိုဒေတာဘေ့စ်ထဲသိုလှောင်ထားပါ အခြားမည်သည့်အလွှာတွင်မဆိုဒေတာကိုသိမ်းဆည်းခြင်းသည်အလုပ်များစွာလိုအပ်သည်။
XHTML လိုက်နာမှု - အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များ၊ API များ၊ RSS နှင့်အခြားအကြောင်းအရာပေါင်းစည်းရေးကိရိယာများကဲ့သို့သောနည်းပညာများပိုမိုပျံ့နှံ့လာသည်နှင့်အမျှပါဝင်သည့်အရာများကိုထုတ်လွှင့်ခြင်းသည်ရိုးရှင်းရမည်။ XHTML စံသတ်မှတ်ချက်များသည်အရေးကြီးသည်၊ အကြောင်းမှာအကြောင်းအရာသည်အခြားဆိုဒ်များ၊ ၀ န်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်တည်နေရာများသို့အလွယ်တကူသယ်ဆောင်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Cross-browser ကိုလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း - browser (ဘရောက်ဆာ) များသည် HTML နှင့် CSS ကိုကွဲပြားစွာဆက်ဆံသည်။ Cross-browser ရဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုသေချာစေတဲ့ hack တွေအများကြီးရှိတယ်။ သငျသညျအစဉျအမွဲတစ်ခုစီ၏နောက်ဆုံးထုတ်3ထုတ်နှင့်အတူစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ထိပ်သုံး browser3ထောက်ခံသင့်ပါတယ်။ အဲဒီ့အပြင်ငါမနှောင့်ယှက်တော့ဘူး။ ခွေးကြီးတွေနဲ့မလိုက်နိုင်ရင်ဘရောင်ဇာသေသွားလိမ့်မယ်။
Cross-platform လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း - အချို့သောလုပ်ဆောင်ချက်များသည်အတူတူသို့မဟုတ် PC, Mac နှင့် Linux ကြားတွင်မရရှိနိုင်ပါ။ မင်းအရင်လုပ်ခဲ့တဲ့အဆင့်တွေအားလုံးကိုလုပ်လိုက်ရင်မင်းဟာပြtroubleနာမဖြစ်သင့်ဘူး၊
ဆောက်လုပ်ပြီးသောအိမ်တွင်ရေပိုက်ပြင်ရန်ကြိုးစားခြင်းသည်အကုန်အကျများသည်။ ရှေ့သို့ကောင်းသော 'ပိုက်' လုပ်ခြင်းသည်သင့်အားရေရှည်တွင်ငွေများစွာသက်သာစေလိမ့်မည်။
ငါခေါ်အလွန်ကြီးစွာသောအရင်းအမြစ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် စိစစ် အခြားဘလော့ဂ်ဖတ်နေစဉ် ကျပန်း bytes။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၊ သင်သည်ကျယ်ပြန့်သောချဉ်းကပ်မှုနှင့်ကျယ်ပြန့်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး application တစ်ခုဖြစ်လာရန်ကြိုးစားနေပါကကျွန်ုပ်သည်ဤအရာများနှင့်အစောပိုင်းကတည်းကသူတို့ကိုယ်သူတို့လျစ်လျူရှုသောသို့မဟုတ်ဂရုမစိုက်သည့် ၀ န်ထမ်းများကိုသတိပြုမိလိမ့်မည်။ ဂရုစိုက်တတ်သောရှေးရှေးရှာပါ! မင်းဘဝကလမ်းပေါ်မှာအများကြီးပိုပြီးလွယ်ကူလိမ့်မယ်။
မိကျောင်းမုဆိုးစတိဗ် Irwin အသက် ၄၄ နှစ်တွင်သေဆုံးခဲ့သည်
5:2006 pm တွင်စက်တင်ဘာ 4, 53 မှာ
ငါပဲ silktide.com test ကိုလုပ်ပြီး ၇.၉ ရတယ်။ ကျနော့် site ထဲကိုခလုတ်တောင်ထည့်လိုက်တယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။